မြန်မာဟာ အာဆီယံ (၁၀) နိုင်ငံမှာ လူ့သက်တမ်းအတိုဆုံးနိုင်ငံဖြစ်လာတဲ့ နောက်ကွယ်က အကြောင်းအရင်း - Zet Star
နိုင်ငံခြားက Date ကုန်ခါနီးစားသောက်ကုန်တွေသွင်းလာပြီး ဘူးချွတ် ပြန်ရိုက်ဖို့ ပုံနှိပ်လောကမှာတောင်ရှိတယ် ဘီစကစ်ဗူးတွေ ပါကင် အသစ် Date Code အသစ်တွေနဲ့ ပြန်ရိုက်ပေးတာရှိတယ်.. နောက်ပြီးယခု ဝင်နေတဲ့ ဆယ်လမွန်ငါးတို့ SHISHAMO ငါးတို့ဆို အောက်လမ်းက ဝင်လာတာပဲ နောက်ပြီး ဘနားမီး ရေချိုပုဇွန် ကက္ကတစ်ငါးတွေဆို အောက်လမ်း ထိုင်းနိုင်ငံကနေ ဗဟို စံပြ ငါးစျေးကို နေ့တိုင်းအဝင်ရှိတယ် ဘယ် FDA မှ မစစ်ဘူး ဒီအတိုင်းပဲဝင်လာတာ။
မြန်မာဟာ အာဆီယံ ၁၀ နိုင်ငံမှာ လူ့ သက်တမ်းအတိုဆုံးနိုင်ငံအဖြစ် စာရင်းဝင်လာနေပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့မြန်မာတွေ အသက်တို ကြတာလဲဆိုတာတော့ သိပြီးကြမှာပါ။
အိမ်နီးချင်းထိုင်း အိန္ဒိယ နဲ့တ ရုတ်တို့ အတွက်တော့မြန်မာဟာအလွန် လုပ်စားကိုင်စားလို့ကောင်းလှတဲ့ စျေးကွက်ကြီးတစ်ခုလိုဖြစ်နေတာမို့ သူတို့နိုင်ငံမှာဥပဒေနဲ့တင်းတင်းကြပ်ကြပ် ကိုင်တွယ်ထားလို့ လုပ်မရတဲ့အရာမှန်သမျှ ခိုးလုပ်ကြပြီး အဲ့ဒီပစ္စည်းပေါင်းစုံ ကို မြန်မာပြည်စျေးကွက်ထဲလာဖြန့် တယ်။
စားသောက်ကုန် ဆေးဝါးမျိုးစုံ လုပ်ငန်းအပါအဝင်အတု တွေလုပ်တယ်။ မြန်မာပြည်ထဲဖြန့်တယ်။ နယ်စပ်ဂိတ်မှန်သမျှမှာ လည်း FDA က မစစ်နိုင်။ စစ်နိုင်သမျှစက်တွေကလည်း ခေတ်မီ ဓာတုဆေးတွေများသမို့ မှန်ကန်စွာ ဓါတ်မခွဲနိုင်သေး။ တစ်ခါတခါ ဓါတ်ခွဲစမ်းသပ်လိုက်တဲ့ အခါမှာလည်း နာမည်ကြီးတံဆိပ်တွေ အပါစားသောက်ကုန် အဖျော်ယမကာ အတော်များများ လူကို ဥပဒ်ပေးတဲ့ ဓါတ်တွေပါတာ FDA ကလည်း မကြာခဏ ထုတ်ပြန်နေရတာ မြင်သိ ကြားတွေ့ကြရမှာပါဘဲ။
သစ်သီးသစ်ရွက်တွေနဲ့ပတ်သတ်တာ မှန်သမျှမြန်မြန်ကြီး မြန်မြန်ပွင့် မြန်မြန်သီး နေ့ချင်းညချင်းမှည့်နိုင်တဲ့ဆေး တွေ ထွင်တယ်။ မြန်မာပြည်ထဲ ဖြန့်တယ်။ အခုဆို ဘာအသီးစားချင်းလည်း ပြောလိုက်ရာသီမရွေး ရတယ်။ ခုည မှည့်ချင်လား။မနက်ဖြန် မှည့်ချင်လားပြော။ များများချိုချင်လား ရတယ်။ ဥပမာ ခရမ်းချည်သီးဆိုရင် ပွဲရုံတွေက အစိမ်းတွေဘဲ ဝယ်တော့တာလို့ ဖတ်မိသေးတယ်။ စျေးကွက်ထဲ က ဝယ်လိုအားကို ဖြန့်ခါနီးမှ အချိန်မှီ မှည့်ပေးလိုက်တယ်လို့ဆိုတယ်။
အသားတု။ဥ အတု ။ လူ အတု။ အတုမျိုးပါင်းစုံ။ကော်ဖီ အချိုရည် ကျန်တာ အတော်များများမှန်သမျှ ဂျင်းတွေ ချည်းဘဲ။ထိုင်းဖက်နယ်စပ်မှာ ထိုင်းရဲက ဖမ်းမိတဲ့သတင်းတွေလည်း မကြာခဏ ဖတ်ဖတ်မိကြမယ်ထင်မိ။
နောက် စျေးအတန်ဆုံးလိုဖြစ်လာတာက အချိုမှုန့်တွေ။ ၂၀၀ ဖိုးဆို လက်တစ်ခုပ် လောက် ရတယ်။ ဒိအတွက် ဗုံးဗောလအောဟင်းတွေထဲထည့်။ ဆီးချိုတွေတက်။ အချိုမှုန့်မပါတော့ရင် မစားတတ် ကြတော့တဲ့အဖြစ်တွေရောက်မှန်းမသိ ရောက်ကြရ။ အချိုမှုန့်ကြောင့်ပဲ ဆီးချို၊ သွေးတိုး၊ နှလုံးရောဂါတွေ ဖြစ်ပြီး သေကြရ။
သာမန်အပေါစားအရက်ဖြူ (OP) ဆိုလည်း ၄၀၀ လေါက်ဆို တစ်ပုလင်းရတယ်။ ပဲလှော်လေး ၁၀၀ ဖိုးနဲ့တွဲကစ်လိုက်ရင် ၅၀၀ ဖိုး ဆို မူးပြီ။ ရေချိန်ကိုက်ပြီ။ ပြီးတဲ့အခါ ဗမာဆေးများများ ကွမ်းယာ ပါးစပ်ထဲထည့်ပြီး ဆေးပေ့ါလိပ်တစ်ရှိုက် နှစ်ရှိုက် အဆုပ်ထဲအထိ ဆွဲထည့်လိုက်တဲ့ အခါတရက် စာ ဖူလုံပြီ။ ရေသန့်ကမှ အရက်ထက် စျေးကြီးနေသေးတယ်။ အဲလိုအပေါစားအရက်တွေသောက်တော့ မြန်မြန်သေကြတာပေါ့။
အရည်မရ အဖတ်မရ ကွမ်းယာဆိုင် ဆိုလည်းနေရာတကာ လက်ညိုးထိုးမလွဲသလို နောက်ဆုံးတော့ ကွမ်းယာသည်တိုင်း ချမ်းသာသွား တာဘဲ အဖတ်တင်တယ်။ တစ်နေ့တနေ့ မြနမာပြည်သာလူတွေ ကွမ်းစားပြီး ပါးစပ်ထဲကထွေးထုတ်လိုက်တဲ့ ပမာဏ ဟာ ငွေသန်းချီ ဖိုးတောင် ရှိတယ် ဆိုလား ဖတ်မိသေးတယ်။ အဲ့ဒီအထဲ ထည့်စားလိုက်ကျတဲ့ အိန္ဒိယက လာတဲ့ ဆေးပေါင်းစုံ။ 92′ အပါအဝင်။ အိန္ဒိယကနေ တစ်လတစ်လကို ဒေါ်လာသန်းချီပြီး ပေးဝယ်နေရတယ်။ အရက်ဆို မြန်မာလူ ၁၀ ယောက်မှာ ၇ ယောက်သောက်တယ်။ ကွမ်းလည်းအလားတူ။
ဒါတွေကို မှီခိုစားသောက်နေကြတဲ့ ဒီနိုင်ငံက လူတွေမှ ကင်ဆာ သွေးတိုး ဆီချို နှလုံး ကျောက်ကပ် ရောဂါ မရ ရင် ဘယ်သူတွေရ မလဲ။
နောက် ဆန် ကို အဓိကအစားအစာအဖြစ် စားသုံးကြတဲ့အဒါ ကစီဓါတ်များတော့ အဆီများလာသလိုအငန်ဆိုလည်းကြိုက်။ အစပ်ဆိုလည်းလက်မလွတ်စေရဘူး.။ စားသောက်ပုံစားသောက်နည်းဟာ အသက်ရှည်ဆုံးနိုင်ငံတွေနဲ့ ဆန့်ကျင်ဖက် ဖြစ်နေတယ်။ အသက်ရှည်တဲ့နိုင်ငံတွေရဲ့ အစားအစာကို လေ့လာကြည့်ရင် ပထမဆုံး ဖျော်ရည်အရည်တစ်ခုကို စသောက်ကြတယ် ပြီးတဲ့အခါ အချိုပွဲလို အစာလေးတွေထပ်စား ကြပြီးမှ နောက်ဆုံးမှာ main food ဖြစ်တဲ့ သားငါးအသီးအရွက်ကိုစား ကြတယ်။ ပြီးတဲ့အခါ ကော်ဖီ သောက်ချလိုက်ကြတယ်။
မနက်ပိုင်းဆို ဘာမှ မစားသေးခင်မှာ အူလမ်းကြောင်းကိုဖျော်ရည်တစ်ခုခုနဲ့ အရင်သောက်ပြီးခံထားကြလေ့ရှိတယ်။
ဥပမာ အိန္ဒိယ ဆိုရင် သူတို့အစား အစာ မှာဂျုံပဲ အသီးအရွက်နဲ့နို့ကို အဓိကထားစားကြတယ်။ ဆီအငန် ကို လုံးဝ နီးနီး မစားကြဘူး။ ဒိအတွက် ကလေးဘဝ ကတည်းက လူတွေ အရပ်ရှည်ကြ တယ် ကြီးလာတဲ့အခါ လူလုံးတွေ ထွား လာကြတယ်။ ခံနိုင်ရည်အား ကောင်းကြတယ်။ ဒါဟာ ကိုယ်တိုင်ရောက်ဖူးတဲ့ နိုင်ငံ ၆ နိုင်ငံလေါက်က စားတဲ့ အစားပုံစံ နဲ့ ဥပမာယှဉ်ပြီးပြောရတာပါ။
စောစောထ အိပ်ယာထ သွားတိုက် မျက်နှာသစ်ဆိုတဲ့ငယ်ငယ်ကသင်ခဲ့ရတဲ့ စာက စပြီးလွဲလာနေသလိုမျိုးပဲ။ မျက်နှာသစ်ပြီး ရေချိုးရေလေါင်းပြီး မှ သွားတိုက်ရင် အပူထွက်သွားတဲ့ အတွက် သွားကျိုးတာ နာတာ မဖြစ်ဘူးတဲ့။ ပြီးတာနဲ့တနေကုန်စားသောက် ။ ညနေကျရေ ချိုး။သွားတိုက်။ ပြီးတော့ ညစာစား။ ဒီတော့ ရှေ့နောက်လွဲနေမှုတွေကအစ သွားတွေပိုးစား။ ယိုင်နဲ့ပြီးပြီးအခေါင်းပေါက်တွေဖြစ်ရာက ရောဂါဝင် အသေစော။ အသက်် တိုရတာ။
ဒါတွေ ကအစ အခြေခံ ကို လွဲမှားနေသယောင်ဘဲလို့မြင်တယ်။ အမှန်ဆိုမနက်စာစားပြီးမှသွားတိုက်။ ညစာစားပြီးမှသွားတိုက်ကြရမှာ။ ဒါတွေက အစ ပြင်မှ ရမယ်။ လူတစ်ဦးချင်းစီက စပြင်ရမယ်။ နောက်မိသားစု လိုက်ပြင်ရမယ်။ နောက် ပတ်ဝန်းကျင်တစ်နိုင်ငံလုံးပြင်မှ ကျန်းမာ အသက်ရှည်ကြမယ်။
ဘယ်လိုပြင်ရမလဲ ဆိုရင် အသီးအရွက် စားချင်ရင် ကွကိုယ်စိုက်စားပါ။ စျေးက ဝယ်ရင် သဘာဝ အတိုင်းခူး ရောင်းတဲ့တောသည်လေးတွေဆီက မသန်မစွမ်းပိုးကိုက် ထားတဲ့ အရွက် တွေဝယ်ပါ။အသီးစားချင်ရင် အပင်ကနေ တိုက်ရိုက်ခူးပေးတဲ့အသီးကို ရှာစားပါ။ အသားငါးလည်း လတ်ဆတ်တာကိုစားပါ။ အချိုရည် လုံးဝ မသောက်ပါနဲ့။ အသီးကို ဖျော်သောက်ပါ။ အငန်လျော့။ အဆိမ့်အချိုအစပ် လျော့စားပါ။
နောက်အရေးအကြီးဆုံးက ဆီ။ ဆီကို ဖြစ်နိုင်ရင် ဆီကြိတ်တဲ့စက်တွေမှာ သွားဝယ်ပါ။ ဒါမှမဟုတ် မြေပဲ နှမ်း ဝယ်ပြီး ကိုယ့်ရှေ့မှာ ကြိတ်ခိုင်းပါ။ စျေးထဲက ဆီတွေမစားပါနဲ့။ ဒီလိုမလုပ်နိုင်ရင် ဆီလျော့စားပါ။ နောက်ပြီး လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပါ။ မနက်ညနေ အချိန်ရ ရင် လမ်းလျှောက်ပါ။ နှလုံးအားကောင်းအောင်သွက်သွက်လျှောက်။ အမြင့်တက်ပါ။ အမောခံနိုင်အောင်ကျင့်ပါ။ အရက် ဆေးလိပ် မူးယစ်ဆေးလုံးဝ မသုံးပါနဲ့။
ညစာကို ညနေ ၅ နာရီကျော်ရင် ထမင်းမပါဘဲစားပါ။ အရည်သောက် အသီးအရွက် အသားငါးဘဲထိုင်စားပါ။ မြန်မာတွေ အသက်ရှည်စေဘို့ စဉ်စားမိသမျှလေး မျှဝေခြင်းပါ။ အာရောဂျံ ပရာမံ လာဘံ။ ကျန်းမာခြင်းဟာ လာဘ်တစ်ပါးပါ။ ကျန်းမာရေးအသိ ကိုယ်စီ ရှိကြ စေချင်ပါတယ်။
ဟိုတလောက ဆိတ်သားခြောက် ဝယ်လာပြီး အိမ် ရောက် တော့ Microwave နဲ့ နွှေး လိုက် တာ ပလပ်စတစ် အရည် တွေ ထွက် လာ လို့ ဆို ပြီး ပုံ နဲ့ တကွ တင် လိုက် တာ ကို ဖတ် လိုက် မိ ပါ တယ်။ မြန်မာပြည် က အစား အသောက် တွေ ဟာ သဘာဝ အနေ အထား က နေ အမျိုးမျိုး သော နည်း တွေ နဲ့ ပြုပြင် ပြီး ပြန် ရောင်း နေ ကြ တာ မို့ တစ်နေ့တခြား ကြောက်စရာ ကောင်း လာ နေ ပါ တယ်။
အားလုံး သိ ကြ တဲ့ အတိုင်း၊ ရောဂါ အားလုံး ရဲ့ အခြေခံ ဟာ အစာလမ်းကြောင်း က နေ လာ တာ ဖြစ် ပါ တယ်။ ပုံစံ အမျိုးမျိုး နဲ့ လာ နေ ကြ တာ ပါ။ အခု နောက် ပိုင်း အလွန် အဖြစ် များ နေ တာ က တော့ Autoimmune ရောဂါ မျိုးစုံ ဖြစ် ပါ တယ်။ ဒီ ရောဂါ ဟာ လည်း တစ်နေရာတည်း မှာ ဖြစ်ခဲ လှ ပါ တယ်။ ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ သုံးလေးနေရာ လောက် မှာ ဖြစ် နေ လေ့ ရှိ ပါ တယ်။
ကျွန်တော့်ဆီကိုလာ တဲ့ စာတွေ Email, Message တွေ ကို ဖတ် လိုက် မယ် ဆို ရင် Autoimmune ရောဂါ တွေ ရယ်၊ ကင်ဆာ တွေ အရမ်း များ လာ နေ ပါ တယ်။ အရင် က အတော်လေး ရှားပါး တဲ့ ကင်ဆာ မျိုးစုံ လည်းတွေ့ နေ ရ ပါ ပြီ။ အသက် ၁၅ နှစ် Melanoma at the anal area နောက်တစ်ယောက် ဒူး ကအနာမကျက် လို့ အသားစ ယူ ပြီး စစ် လိုက် တဲ့ အခါ Anaplastic Non-Hodgkins lymphoma ပါ တဲ့. နောက် တစ်ယောက် ဗိုက် အတွင်း lymphoma အသည်းကင်ဆာ၊ အဆုပ် ကင်ဆာ တွေ က လဲ များ သလား မပြော နဲ့။ အဆင့် ၄ တွေ ချည်း ပါ ဘဲ။ နောက်တစ်ယောက် က Pancreatic cancer. အစားအသောက် ကြောင့် ဖြစ် တဲ့ အူလမ်းကြောင်း ကျန်းမာရေး ကို မထိန်း နိုင် ဘူး ဆို ရင် ခံစား ရ တတ် တဲ့ နောက်ဆက် တွဲ ရောဂါ တွေ ပါ ဘဲ။
နောက်တစ်ခု သတိ ထား မိ တာ က တော့ နိုင်ငံခြား မှာ နေ နေ ကြ တဲ့ မြန်မာ တွေ လည်း အတော် များများ Autoimmune ရောဂါတွေဖြစ် နေ ကြ ပါ တယ်။ သွေး ဖောက် စစ် သူ တွေ အတော်များ များ မှာ ရှိ နေ ကြ ပါ တယ်။ ပြန်သုံးသပ် ကြည့် တော့ ၊ အများစု ဟာ နိုင်ငံခြား ရောက် နေ ကြ ပေ မဲ့ ကိုယ့် မြန်မာအစားအစာ တွေကို ဘဲ စား ကြ ပါ တယ်။ ထမင်း ဟင်း ပါ ဘဲ။ နောက် ပြီး မြန်မာပြည် က အစားအသောက် မျိုးစုံ လူကြုံ နဲ့ သော်လည်းကောင်း၊ ကိုယ်ကိုယ်တိုင် သော် လည်း ကောင်း တပွေ့ တပိုက်ကြီး ဝယ်ယူ လာ ပြီး freezer ထဲ မှာ ထည့် ပြီး တဖြေးဖြေး စား နေ ကြ တာ သတိ ပြု မိ ပါ တယ်။ ငပိကြော်၊ ငါးချောက် ကြော်၊ လဘက်၊ အကြော်မျိုးစုံ၊ မုန့်ဟင်းခါး အရည် တွေ စ သည် ဖြင့် ဖြစ် ပါ တယ်။
ဒီ ရောဂါ တွေ ရဲ့ ဖြစ်ကြောင်း ဟာ အမျိုးမျိုး ရှိ ပါ သော် လည်း အဓိက က တော့ အစား အသောက် ပါ။ ဒီအတိုင်း ဆက် သွား ကြ မယ် ဆို ရင် တိုင်းပြည် အတွက် ရင်လေး မိ ပါ တယ်။ ကိုယ် နဲ့ အတူ ကိုယ့်မိသားစု ကို စောင့် ရှောက်ဖို့ ၊ သတိ လေးကပ် ပြီး ဥာဏ် အကူ လဲ လို ပါ လိမ့် မယ်။ ဘယ်လောက် ကြိုက် တဲ့ အစာ ဘဲ ဖြစ်ဖြစ် ဥပါဒ် ရှိ လာ ပြီ ဆို ရင် ဖြတ် နိုင် ရ ပါ မယ်။ ရောဂါ ရ လာ ပြီ ဆို ရင် ရှာ ထား သမျှ ငွေ တွေ ကုန်အလူးအလိမ့်ခံရ ရောဂါ သံသရာ ဝဲဂယက် မှာ ချာချာ လည် နေ တော့ မှာ ဖြစ် ပါ တယ်။
အခု လို အဖြစ် မျိုး ရောက် ရ တာ ဟာ လဲ လူအများစု ဟာ ဗဟုသုတ ခေါင်း ပါး နေ ကြ တာ တစ် ကြောင်း လောဘ ဦးဆောင် နေ တာ က တစ် ကြောင်း ရသတဏှာ ကို မကျော်လွန် နိုင် တာ က တစ်ကြောင်း အစိုးရ အ နေ နဲ့ အစားအသောက် တွေ အ ပေါ် ကြပ်မတ် မှု ထိထိ ရောက် ရောက် မရှိ တာ က တစ် ကြောင်း ( ရောဂါ မျိုးစုံ ဒီလောက် တောင် ဖြစ် နေကြ တာ အစိုးရ သိ ရဲ့ လား မသိ ပါ ) ဖြစ် လာ မဲ့ အန္တရာယ် ကို သဘော မပေါက် တာ က တစ်ကြောင်း တိုင်းပြည် ဆင်းရဲ တာ က တစ် ကြောင်း ကြောင့် ဖြစ် ပါ တယ်။ မိမိ နှင့် မိမိ ၏ မိသားစု ကို ဥာဏ် သုံး၊ သတိကပ် ပြီး စောင့် ရှောက် သူ များ ဖြစ် နိုင် ကြ ပါ စေ။
← ပြောင်းလဲပြုပြင်မှုတွေ လုပ်ပြီး အမြန်ကုသသင့်နေပြီဖြစ်တဲ့ မြန်မာ့အိမ်ရှင်မ ရောဂါလက္ခဏာများ
ကုန်းဘောင်ခေတ် နန်းတွင်းအရှုပ်တော်ပုံသမိုင်းရဲ့ ဝမ်းနည်းဖွယ်နေရာ တခု →